Otu Purmecha Ndepụta Ndị Anyị Debanyere Aka Mee ka CTR anyị mụbaa site na 183.5% | Martech Zone
Anyị na-akpọsa na saịtị anyị nke anyị nwere karịrị 75,000 ndị debanyere aha na ndepụta email anyị. Ọ bụ ezie na nke ahụ bụ eziokwu, anyị nwere nsogbu na-enye nsogbu ebe anyị na-arapara na folda spam ọtụtụ. Ọ bụ ezie na ndị debanyere aha 75,000 dị oke mma mgbe ị na-achọ ndị na-akwado email, ọ dị oke egwu mgbe ndị ọkachamara email mere ka ị mara na ha anaghị enweta email gị n'ihi na ọ na-arapara na folda junk.
Ọ bụ ebe dị egwu ịnọ na m kpọrọ ya asị. Ghara ikwu eziokwu na anyị nwere ndị ọkachamara email dị iche iche dị ka ndị na - akwado ha - 250ok na Agbanyela. M nwedịrị ụfọdụ ribbing si ọkachamara Greg Kraios na a gbara ajụjụ ọnụ n'oge na-adịbeghị anya ebe o kporo m dika spammer.
Isi ihe dị na nsogbu m bụ eziokwu na ndị mgbasa ozi na-achọ nnukwu ndepụta. Ndị na-akwado email depụtara email anaghị akwụ ụgwọ site na pịa-site-ọnụego, ha na-akwụ ụgwọ site na nha ndepụta. N'ihi ya, amaara m na ọ bụrụ na m sachaa ndepụta m, aga m asa ahụ na nnweta mgbasa ozi. N'otu oge ahụ, ọ bụ ezie na ịkwalite nnukwu ndepụta ga-adọta ndị mgbasa ozi, ọ bụghị edebe ndị mgbasa ozi bụ ndị tụrụ anya itinyekwu aka.
Ọ bụrụ na m chọrọ ịbụ ezigbo marketer na ihe atụ maka ndị na-ege m ntị, ọ bụ oge ịme nsacha na anyị akwụkwọ akụkọ kwa ụbọchị na kwa izu ndepụta:
M wepụrụ adreesị email niile na ndepụta m nke dị na ndepụta ahụ karịrị otu afọ mana emeghere ma ọ bụ pịrị apị na email. Ahọrọ m otu afọ dị ka ule ahụ ma ọ bụrụ na enwere oge ụfọdụ ebe ndị mmadụ nwere ike nọrọ na ụtụ, mana ha na-eche oge ha iji nyochaa akwụkwọ akụkọ maka isiokwu ndị dị mkpa.
Agbụrụ m ndepụta ndị fọdụrụ site na Neverbounce to wepu adreesị ozi-e nwere nsogbu site na listi m - bounces, disposables na adreesị ozi-e catchall.
Mara na m ga-akụtu onye debanyere aha m ọnụ na-atụ ụjọ, mana ọ rụpụtara nsonaazụ dị egwu mgbe izu 2 zigara akwụkwọ akụkọ anyị:
Anyị wepụrụ Ndị debanyere aha email 43,000 na anyị chịkọbara n'ime afọ iri gara aga ma anyị gafere ugbu a na ndepụta nke 32,000.
Ọnụego ọnụọgụ anyị mụbara site na onye were 25.3%! Agaghị m eche n’echiche ozi adreesị email nwụrụ anwụ na-adọkpụ anyị - Obi dị m ụtọ na Greg kụrụ m isi n’ajụjụ ọnụ ahụ.
N'ihi na anyị nọ na igbe mbata ugbu a, ndị emeghe ọnụego site na 163.2% na anyị pịa-site na ọnụego site na 183.5%!
Ugbu a, tupu ị kwuo… nke ọma, Douglas naanị gị kewara nke ọhụrụ denominator na ọ bụ ya mere i jiri nwee mmụba ahụ. Nope. Nke a bụ delta n’etiti usoro mmeghe ọhụụ m na ọnụego mmeghe ọhụụ, yana CTR ochie na CTR ọhụrụ. Nsogbu dị na ndepụta anyị bụ na enwere ọtụtụ ndị debanyere aha na-enweghị ọrụ.
Anyị ka nwere ISPs nwere nsogbu nke na-anaghị etinye anyị na Igbe mbata, mana ọ bụ afọ ole na ole gafere ebe anyị nọbu! Ugbu a, anyị na-eche echiche iwu iwu na ọrụ email anyị nke na-eme nke a na-akpaghị aka n'abalị. Anyị kwukwara mgbakwunye nhọrọ ọkọlọtọ maka ndepụta mkpụrụ anyị iji hụ na ha agaghị eme ka ha dị ọcha, ebe ọ bụ na ha anaghị emepe ma ọ bụ pịa email.
ngosi: 250ok na Agbanyela Ha abụọ bụ ndị na-akwado akwụkwọ anyị Martech.
Tags: 250oknnapụtaemail ctrọnụego nnabata emailnna ukwu wepu aha yaọchawepụdebanye aha ndebanye ahaehichapụ